Flyer - Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ - Ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Nke a na-enye ohere ịnweta Ụgwọ Ụgwọ Foundation na-emepụta ihe anyị na-eme. E bipụtara mbipụta a na July 2017.
Na Regwọ Ọrụ wegwọ ahụ anyị na-enye nghọta dị mfe nghọta, nke sayensị nke onwe onye maka onye ọ bụla gbasara ịhụnanya, mmekọahụ na Intanet. Biko jiri ma kekọrịta mpempe akwụkwọ anyị, mana kweta na ọ bụ isi mmalite ya. Anyị na-eji Creative Commons CC-BY-ND ikikere.
Akwụkwọ ikike a na-enye ohere maka nkesa, azụmahịa na nke na-abụghị nke azụmahịa, ọ bụrụhaala na a gafere ya na-agbanweghi agbanwe na n'ozuzu ya, jiri kredit nye Regwọ Ọrụ .gwọ Iji lelee akwụkwọ ikike, biko pịa Ebe a. Iji lee koodu iwu, biko pịa Ebe a.
Pịa na njikọ a iji budata Foundationgwọ Ọrụ Foundation Flyer…